Boiling Point | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← Post-Moderinism (Poem) – (the Last Part)
Ten Kinds of Reference Book →
5 responses to “Boiling Point”
ဒီဆောင်းပါးကကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်။ သိပ်တော့ မကြိုက်လှဘူး။ အခုလိုပြောတာ ရပါတယ်နော်။
ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျ.။ ဂဲလ်စပန်က အမေရိကန် နိုင်ငံသား ထင်တယ်နော်..။ အမေရီကန် ဦးဆောင်ပြီး ကမ္ဘာလုံးချီ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့ နှိုးဆော်ထားတယ်..။
တကယ်တမ်းကျတော့..သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်. ကာဘွန် ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချရေးမှာ အမေရိကန် လက်မှတ်မှ မထိုးခဲ့တာ..။ ပြီးတော့ ဂလိုဘယ် သဘော ပူးပေါင်းမှုမှာ လက်တဆုပ်စာ နိုင်ငံလေးတွေတောင် မပူးပေါင်း နိုင်သေးဘူးနော်….။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြဿနာကို ချပြသွားတဲ့ အတွက်တော့ လေးစားရပါတယ်.။ ခုလို ဘာသာပြန်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်..။
သိပ္ပံပညာမှာ မျှော်လင့် နေသလို.. နိုင်ငံရေးမှာလည်း မဟာပေါင်းစည်းမှု သီအိုရီ တခု ဖော်ထုတ်နိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ..။ ဒါမှ မဟုတ်.. နိုင်ငံရေး သမားကြီး တယောက် ပြောဖူးသလို…နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံးကို ခန့်အပ်တော့မယ် ဆိုရင် ပထမမဂ်လောက် ရပြီးမှ ခန့်အပ်ရင် ဘာပြဿနာမှ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ပဲ…မျှော်လင့်မိတယ်….း)….
ကြိုက်ပါ၏။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ပါ။ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။
၂၀၀၆ ကရေးခဲ့တာဆိုတော့ လတ်တလော အဖြစ်အပျက်တွေ ဘာမှ ထပ်မထည့်နိုင်ဘဲ ဒီအတိုင်း တင်တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
လျှာရှည်ပြီး ဖြတ်ညှပ်တာ အပိုင်းအစများသွားတော့ ဖတ်ရတာ ဆက်မမိဘဲ ရှုပ်နေကြတာတော့ သည်းခံကြပါကုန်။
ဟုတ်ကဲ့…အဲဒါ ကျန်ခဲ့တယ်..ဦးသင်ကာ.။ ၂၀၀၆ နဲ့ ၂၀၀၉ တော်တော် ကွာသွားပြီ ဆိုတာ…။